Soo-saaraha Tayada Sare leh Tris (2-carboxyethyl) fosfine Hydrochloride/TCEP-HCL CAS 51805-45-9 Soo-saaraha iyo Bixiyaha | Zhuoer
Soo-saaraha Tris (2-carboxyethyl) fosfine Hydrochloride/TCEP-HCL CAS 51805-45-9 waa wakiil yaraynta thiol-aan lahayn ur leh oo leh codsiyo badan oo ku jira kiimikada borotiinka iyo cilmi-baaris proteomic oo xuddun u ah fududeynta tirada ee yaraynta xidhmooyinka disulfide. Isku -dhafka isku -dhafan ayaa si fudud loo milmi karaa oo aad ugu deggan xalalka aqueous. Dhab ahaantii TCEP HCl waxay ku deggan tahay biyo -biyoodka, aashitada iyo xalalka aasaasiga ah.
Barta dhalaalaysa 177 ° C
cufnaanta 1.041 g/mL 25 ° C
Cilmi-baadhayaashu waxay inta badan ku daraan Soo-saare Tris (2-carboxyethyl) fosfine Hydrochloride/TCEP-HCL CAS 51805-45-9 si ay u diidaan borotiinka inta lagu jiro diyaarinta shaybaarka borotiinka ee electrophoresis gel. TCEP waxay sidoo kale waxtar u lahayd kaydinta muddada-dheer ee borotiinka iyo diyaarinta shaybaarka codsiyo kale oo badan, sida:
Isku -xidhka borotiinka ama calaamadaynta
Qalabka korontada ee korontada ku shaqeeya oo leh ogaanshaha fluorescence laser-ku-dhalisay (CE-LIF)
Nadiifinta borotiinka oo ay ku jirto chromatography
Inta lagu jiro go'doominta DNA iyo RNA
Sideen u qaataa TCEP-HCL CAS 51805-45-9?
1kg, 25kg xirxirid, ama sidii loo baahdo.
Hore: Nadiifnimo sare Tris Hydrochloride/TRIS-HCL CAS 1185-53-1 oo leh qiimaha warshadda
Xiga: Soo-saaraha 4-Dimethylaminopyridine/DMAP CAS 1122-58-3 oo leh tayo wanaagsan
Tris (2-carboxyethyl) fosfine Hydrochloride
TRIS (2-CARBOXYETHYL) PHOSPHINEHYDROCHLORIDE